Fudza protein yako! - batsira mapuroteni munguva dzakaoma
Masikiriri anogara mubirch grove uye muNovosibirsk zoo, mumakona akasvibira mukati meguta nekupfuura (mamiriro akafanana anogona kunge akajairika munzvimbo zhinji dzepaki dzesango kutenderera nyika).
Vachishandisa nzara dzakasimba, vanofamba nemumiti nekukurumidza zvekuti haugone kuzviteedzera. Uye kusvetuka, "kutonga" muswe. Kunyangwe painodonha kubva pakureba kwemamita mazhinji, squirrel angangoramba asina kukuvara, achishandisa muswe wayo wakatsetseka kunge parachuti.
Uye ivo vakajaira vanhu kwenguva yakareba, saka vanodya mabatiro kubva pamaoko avo chaipo. Panguva yekudyisa, kutarisa vakanaka ava kunyanya kuda kuziva. Nemapine nzungu uye makumbo avo madiki, iwo squirrels anehunyanzvi chaizvo, nekukurumidza uye nenzira, achisiya chete murwi wemakomba.
Ivo vane chishuwo chakanaka, uye meno avo, seaya chero emakonzo, anokura hupenyu hwavo hwese. Asi kunyangwe kana mhuka tsvuku-bvudzi, ichibvisa iyo nucleoli, sevanga-rinodzvanya nzungu kubva muchanza, haikanganwe nezvekuchengetedza kwayo uye inogara yakagadzirira kusvetuka. Mhuka iri nguva dzose pane akangwarira, nekuti kunzwa, zvinoitika, ndiyo yakanyanya kuvandudzwa pfungwa mavari. Uye zvakare, mapuroteni ane vibrissa - imwe nhengo yekubata panzeve, pamakumbo epamberi, padumbu uye nendebvu.
Dzinodyiwa neshavi munguva yechando
Asi kunyangwe kana yagutswa, tsindi haikanganwi nezvekudya mumwaka unotonhora. Achisimudza muswe wake, mumasvetuko akati wandei anozviwana padyo necache, kwaanovanza zvekushandisa munguva yechando.
Matsutso ndiyo nguva yavo inopisa kwazvo, uye kune nzvimbo zhinji dzakavandika nemakoni, mhodzi dzemiti, nzungu pakati pemidzi, kunyangwe acorn, kana zvikasangana, kuwedzera kumatanda ari mumakomba. Chokwadi, haugone kuona howa hwakarembera pamapazi, kunyange izvi zvimwe zvichiitika musango.
Chokwadi, kuti ikunde pamusoro penzara mwaka, imwe tsindi inoda zviuru zvitatu nzungu. Saka iwe unofanirwa kufamba, hazvisi zvechinangwa ivo zvavanoti "kutenderera kunge tsindi iri vhiri". Iko kusagadzikana uye kugona kweiyi isina kuneta busting inogona kungoitirwa chete.
Ichokwadi, squirrel anoshanda nesimba, aichengeta chikafu mumatsutso ese, asinganeti, anokurumidza kukanganwa nezve "zvakavanzika" zvake uye anozviwana netsaona, achishandisa zvinhu zvechipmunks nembeva, achivawana kunyangwe vari pasi pehuswa hwemamita 1,5. chando. Mamwe makonzo madiki uye shiri dzinoshandisa kukanganwa kwake.
Hupenyu hwe squirrel
Masikiriri anowanzoita arboreal, asi mukushaya chando ivo vanopedzera pasi kutsvaga chikafu kwenguva yakareba, vachiratidza chiitiko chikuru mangwanani nemanheru. Munguva yechando, hausi kuzowana tsindi muchando, dzinosvetuka zvakanyanya pamusoro pekorona dzemiti, idzo kana zvikaitika njodzi dzinova pekuvanda.
Mumazaya echando akakomba, mhuka inobuda munzvimbo yayo yekugara kuti izvidye chete kana kuti kazhinji inowira munzvimbo yekutsimwaira, haibude mugomba kwenguva yakareba, ichimirira kunze kwemamiriro ekunze akaipa emuchando. Dzimwe nguva, mune kutonhora kwemamiriro ekunze, squirrel masumbu mumakomba eanosvika 3-6 vanhu, panguva yakajairwa nguva, imwe neimwe iri yega.
Kunaya mwaka mumasikiriri
Nenzira, veksha kana zvakajairika squirrels (zvinobva muchiLatin Sciurus vulgaris), molting kaviri, uye muswe kamwe pagore, ndizvo zvinogara vanogara mumasango uye vamiriri chete vejere squirrel mumhuka dzeRussia.
Mifananidzo yezvisikwa izvi zvinoyevedza, kunyange mumakwenzi, anogona kuonekwa pajasi remaguta, kusanganisira Zelenograd, Yakutsk, Germany Eckernförde, uye kumwe kunhu.
Mapuroteni anowanda sei?
Mushure memavhiki mashoma, tsindi dzinokura dzine mvere, mwedzi gare gare ivo vanoona mwenje uye vanotanga kudzidza nyika mukubwinya kwayo kose kunze kwegomba. Tsindi amai vanounza vana, "madzibaba" haatore chikamu mukuguma kwevana, kana vachiedza kuswedera padyo navo, vanogona kutorwiswa naamai. 8-10 mavhiki mushure mekuzvarwa, chizvarwa chevechidiki chinotanga hupenyu hwadzo hwakazvimiririra.
Nekuda kwezviitiko zvinozivikanwa zvinozivikanwa zvine chekuita nedenda uye kuzviparadzanisa, apo vagari vaifanira kugara pamba, tsindi dzemadhorobha dzakasiiwa dzoga nemasikirwo kwenguva yakareba. Kushaikwa kwechikafu kwakanganisa kurera kwevana uye kudzikira kwehuwandu.
Ndeapi mapuroteni asingafanire kudyiwa
Ivo vanofanirwa kuchengetedzwa nekupihwa chikafu (chete kwete nenzungu, nekuti protein irimo mairi haina kunyudzwa nezvipuka!). Ngatirege kukanganwa nezvehama dzedu diki. Uye, kuenda kunofamba mupaki, rangarira kuti tsindi hadzidyiswe, tora chimwe chinhu kwavari. Mushure mezvose, ivo vakamirira.
Tsindi inogadzirira sei nguva yechando?
Nzira yekugadzira squirrel kubva kumabhureki? - hunyanzvi
Chokwadi chinonakidza nezve squirrels uye flying squirrels
Chokwadi chinonakidza nezvehunhu hwevana
Mbira inorara here?
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,468 masekondi.